OweScandal uyavuma ukuthi umshado wakhe usufadalele | News24
OweScandal uyavuma ukuthi umshado wakhe usufadalele
Johannesburg - Umlingisi wakuleli uSello Maake ka Ncube odlala indawo kaDaniel kuScandal uthi usephonse ithawula kwezothando.
Umshado kaNcube nosomabhizinisi uPalesa Mboweni, uphele ngemuva kwezinyanga eziyisishigalombili benze umshado wesintu.
Iphephandaba iSunday Sun libike ukuthi uNcube usefuna ukuqhubekela phambili nempilo kepha uMboweni uyanqaba ukusayina amaphepha esehlukaniso.
OLUNYE UDABA: Usezoba ngugogo umlingisi weGenerations entsha
Umngani osondelene nalezi zithandani uthe: "UPalesa useke washo ukuthi akazimisele ngokuhlukana noNcube futhi usazimisele ngokuhlenga umshado wabo."
Ethintwa uNcube ukuqinisekisile ukuthi seligqabukile ifindo, wananela ngokuthi awukho umuzi ongenazindaba zawo.
"Sizame konke kepha akukho okusebenzayo."
UMboweni uthe akathandi ukuphawula ngomshado wakhe okwamanje.